सुन्दर देखिन मेकअप चाहिन्छ र? – Health Post Nepal
२०७६ फागुन २४ गते १७:३४
कुनै जमाना थियो बलिउड अभिनेत्रीहरू बिना मेकअप सार्वजनिक कार्यक्रम वा क्यामेरा सामु आउन हिचकिचउँथे।
अब समय फेरिएको छ। अहिले हिरोइनहरू बिना मेकअप पनि देखिने गरेका छन्। अहिले कसैले बिना मेकअप सेल्फी फेसबुकमा पोस्ट गरिरहेका हुन्छन् त कोही मेकअप बिनै बाहिर निस्किरहेका हुन्छन्। मेकअप बिना तस्बिरमा देखिएका पाँच बलिउड अभिनेत्री यस्ता छन्।
काजल अग्रवाल बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन्। काजलको बलिउडमा मात्र नभएर साउथ फिल्म इन्डस्ट्रिमा पनि ठूलो नाम छ। काजलले केही समय पहिले आफ्ना मेकअप बिनाका केही तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी थिइन्।
उनले तस्बिर पोस्ट गर्दै लेखेकी थिइन्, ‘मान्छे आफूले आफैलाई धेरै खोज्न सक्दैन। हामी यस्तो दुनियामा रहेका छौं, जहाँ मान्छे बाहिरी सुन्दरता पाउनका लागि पागल छन्। लाखौं रुपैयाँ कस्मेटिक र सौन्दर्य उत्पादनमा खर्च गर्छन्। उनीहरू सोचीरहेका हुन्छन् एक परफेक्ट बडी मिलोस्।’
सारा अलि खानको पछिल्लो समय रिलीज भएको फिल्म ‘लव आजकल–२’ हो। यस फिल्ममा कार्तिक र आर्यनको जोडिलाई मान्छेले मन पराए। तर, फिल्मले कुनै खास कमाल गर्न सकेन। केही दिन पहिले सारा मुम्बई एयरपोर्टमा देखिएकी थिइन्। उक्त समयमा उनी बिना मेकअपमा थिइन्। बिना मेकअप पनि उनको सुन्दरता कम थिएन।
बलिउड अभिनेत्रीहरूमा सोनम कपुर भन्ने वित्तिकै धेरैले उनको फेसनलाई सम्झिन्छन्। उनी सधै प्रफेक्स लुकमा रहन चाहने नाइकामा पर्छन्। केही दिन पहिले सोनमले आफ्नो बिना मेकअपको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा शेर गरेकी थिइन्। उनको इन्स्टाग्राममा उक्त तस्बिर शेर गरिएको थियो। तस्बिरमा क्याप्सन थियो, ‘बिना मेकअपको तस्बिर’।
पूर्व मिस युनिवर्स सुष्मिता सेन आजभोली आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डलाई लिएर निकै चर्चामा छिन्। उनी ४४ वर्षकी भइन्। तर, उनको सुन्दरता भने जादूभयी छ। उनको सुन्दरताले जो कोहीलाई लालायीत पार्नेगर्छ। उनको पनि एउटा बिना मेकअपको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। जसमा उनी निकै सुन्दर देखिएकी छन्।
कटरिना कैफका थुप्रै फ्यान छन्। उनको लुक र जादूमयी अभिनयका अलग–अलग फ्यान छन्। उनी पनि सधै फिटेनश र आकर्षक लुकमा रहने नायिकामा पर्छन्। तर, केही दिन पहिले उनी एउटा जिम क्लब बाहिर बिना मेकअप देखिएकी थिइन्। उनी बिना मेकअपको तस्बिरमा पनि निकै सुन्दर देखिएकी थिइन्।
आमाले किशोरीलाई के सिकाउने?
किशोरावस्थाका छोरीलाई आमाले भन्नै पर्ने चार कुरा
३७% किशोरीको १८ वर्ष नपुगी विवाह र जोखिमपूर्ण गर्भाधान, २५ वर्षमा ३६% ले बढ्यो जनसंख्या
१९ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा विकास’ रणनीति, यस्तो छ ७ वर्षे मार्गचित्र
लैंगिक विभेदले किशोर–किशोरीमा पर्न सक्छन् यस्ता स्वास्थ्य असर
नेपालमा ७७ प्रतिशत एचआइभीको कारण विनाकन्डम यौनसम्पर्क, जम्मा प्रयोगकर्ता ८ प्रतिशत
बढी समय स्क्रिनमा बिताउनु मुटुका लागि खतरा : अध्ययन